Arin Ay Khasab Tahay In Aad Ka Ogaato Ilhan Cumar…Arag Faafaahinta | Xaqiiqonews
Arin Ay Khasab Tahay In Aad Ka Ogaato Ilhan Cumar…Arag Faafaahinta
Ilhan Cabdulaahi Cumar Ayaa Cahar Cusub bartay dadka doonaya in ay noqdaan Ameerikaan iyada oo isku soo sawirtay “eeygeeda Yar”
Mar ay ka jawaabeysay Ilhan hadii ay daacad u tahay Mareykanka iyo in kale waxa ay af cad ku tiri “I took an oath to uphold the Constitution.” oo ay ula jeedo “Waxaan ku dhaaranayaa in aan raaci doono Dastuurka”.
Waxaa jira dad badan oo Soomaali ah kuwaasi oo si indho la’aan ah ula dhacay qaabka sixirka ah ee Ilhan oo qaxooti ah ay mar kaliya uga soo dhaxmuuqatay Congress-ka Mareykanka, waxa ay sameeyeen wax walbo oo ay ku taageeri karaan, hase yeeshee waxa aysan dad badani ogeyn ayaa ah waa tuma Ilhan Cumar-ta Dhabta ah?
Cumar(Magaca ay ugu yeeraan saxaafadda Mareykanka) waa gabar Soomaali-Mareykan ah, inkastoo Ay soomaaliya ka soo jeedo, hase yeeshe magaceeda iyo waxa ay tahay waxaa na baray warbaahinta Xisbiga Dimuqaraadiga, gaar ahaan Newyorka Times iyo Washintong Post ayaa sameeyey qaabka ay hadda u egtahay Miss Ilhan.
Isbadal Xogaa ah
Wan kugu raacsanahay in Ilhan ay ka fikir duwantahay Trump iyo ragga aadla u fog ee u janjeera dhanka yahuudda, balse adigu ma igu raacsantahay in Ilhan badashay afkaarteedii hore ee ku dhisnaa Yahuud Naceybka iyada oo markani isku dayeysa in dadweynaha Mareykanka u sheegto in ay xiiseyso waxyaaabaha ay iyaga xiiseeyaan.
Ilhan Cabdulaahi Cumar Oo Isku soo sawirtay eey yar
Ilhan ayaa faafisay sawirada iyada oo isku sawirtay eey yar, dadka qaar ayaana arintani ku tilmaamay “olale doorasho” oo ay Ilhan isku sii diyaarineyso in dib loo soo doorto, wallow dadka qaarna ay ka shakiyeenba dhaqanka mar la araga ah ee Ilhan ay la soo baxday.